ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများသည် တိကျသောအရွယ်အစား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် တင်းကျပ်မှုများရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းအင်၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပါသည်။၎င်းကို အဆင့်မြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် နည်းပညာအရ အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ နည်းပညာအဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
1. ကာဗွန်သံမဏိပိုက်ဆွဲသူများသည် တိကျသောအရွယ်အစား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် တင်းကျပ်မှုရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းအင်၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်သံမဏိ နို့သီးခေါင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။၎င်းကို အဆင့်မြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် နည်းပညာအရ အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ နည်းပညာအဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
3. Hose Menders သတ်မှတ်ချက်
အရွယ်အစား ပိုက် OD mm အထူ မီလီမီတာ အရှည် မီလီမီတာ အလေးချိန် g ညီညွတ်
၁/၂ ၂၁.၂375 ၁၀၉
၃/၄ ၂၆.၅3၁၀၀၀ ၁၇၄၈
1 ၃၃.၅ ၃.၅ 60 ၁၇၁
၁-၁/၄ 42 ၃.၅ 70 ၂၅၂
၁-၁/၂ 48 ၃.၅ 70 ၂၉၂
2 60480 ၄၇၅
4. ပစ္စည်း: ကာဗွန်သံမဏိ;
5. မျက်နှာပြင်- သွပ်ပြား၊ မွမ်းမံထားသည်။
မှတ်ချက်- သွပ်ပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သံမဏိများသည် မွမ်းမံထားသောသံမဏိများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
6. အလုပ်ဖိအားသည် ရေပိုက်တည်ဆောက်မှုနှင့်အတူ ကွဲပြားပြီး လျှောက်လွှာသည် ပိုက်စနစ်ရှိ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်း၏ အလုပ်ဖိအားထက် မကျော်လွန်စေရပါ။
8. စည်းမျဥ်းများ ငွေပေးချေမှုများ- မထုတ်လုပ်မီ TT 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများနှင့် B/L မိတ္တူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လက်ကျန်ငွေကို USD ဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်းအားလုံး၊
9. ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- ထို့နောက် Pallet များပေါ်တွင်ပုံးများထဲတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
10. ပေးပို့သည့်ရက်စွဲ- 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက် 60 နှင့် နမူနာများကို အတည်ပြုခြင်း၊
11. ပမာဏသည်းခံမှု- 15%။
ယခင်- KC နို့သီးခေါင်း
Hinged Pipe Clamp, Hose With Coupling, လျောက်ပတ်တယ်။, American Standard Fittings များ, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ,